‘विदेशबाट आएकालाई नलुकाउनुस्, सबैलाई खतरा हुन्छ’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत २७ गते १७:३७
चारैजनाको अहिले धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। तर, सुदूपश्चिमका सबै जिल्लालाई एकदमै अलर्टमा राखिएको छ। याे संक्रमणलाई फैलिन नदिनका लागि जारी लकडाउनमा सुदूरपश्चिममा प्रहरी परिचालनकाे रणनीतिका बारेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका निमित्त प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) देवबहादुर बोगटीले हेल्थपाेस्ट नेपालसँग कुराकानी गरेका छन्
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि यसको जोखिम नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले कस्तो रणनीति साथ काम गरिरहेको छ?
सर्वप्रथम आफैं सुरक्षित हुनुपर्‍यो। आफू सुरक्षित भएर नागरिकको सुरक्षा गर्ने हो। भारतसँग सम्पर्कको दृष्टिकोणले सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै जटिल छ। हामीले अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा स्थलगत रूपमा सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौं। विशेषतः कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि उच्च सावधानी अपनाइरहेका छौं।
कार्यालय वा घरभित्र छिर्नासाथ ग्लोब्स् प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजर र पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराइरहेका छौं। साथै दूरी कायम गर्नु अर्को मुख्य कार्य हो। हाम्रो ब्यारेक, भान्साहरूमा कोलिन, स्यानिटाइजर, मास्क, साबुनपानीसहित आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य टोली पनि आइराखेको छ।
गड्डाचौकी, दोधारा चाँदनीसहितका नाकाहरूमा खटिने प्रहरीहरूको स्याम्पल लिएर टेस्ट गर्न पठाउँदैछौं। पहिलो चरणमा भारतबाट आएका सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएका प्रहरी कर्मचारीहरूको परीक्षण गरिन्छ। र, हाम्रै आफ्नै स्रोतसाधनलाई परिचालन गरेर पनि सुरक्षित रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ।
अनि लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा?
लकडाउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छ। घरबाट बाहिर ननिस्किनका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गरिँदैछ। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूका सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइबुझाइ गरेर पठाउने गरिएको छ, सचेत गराइदिएको छ। समग्र लकडाउनमा जनताको साथ छ। प्रभावकारी भएको छ।
लकडाउनका क्रममा थप जनशक्ति परिचालन गर्नु भएको छ?
कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले थप जनशक्ति माग गर्छन्। गुल्म र गणमा जनशक्ति हुन्छ। डडेल्धुराको पर्शुराम साइडतिर, तातोपानीतिर थप शक्ति पठाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि हाम्रो समन्वय भइरहेको छ। अहिले महाकाली नदीबाट पौडी खेलेर आउनेहरूमाथि विशेष निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी आउनेहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक भएअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। क्वारेन्टाइनमा राखेपछि संक्रमण भएको भए पनि फैलिन पाएन। सिमावर्ती जिल्ला तथा बैतडी, डोटी लगायतका जिल्लाहरूमा पनि हामीसँग भएको रिजर्भ शक्ति परिचालन गरिएको छ। भारतसँगका नाकाबाट कसैलाई पनि प्रवेश गर्न दिनु भएन। प्रवेश गरेमा सीमा क्वारेन्टाइनमा पठाउनुपर्‍यो भनेर उच्च सतर्कताका साथ काम गरिरहेका छौँ।
भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ?
मंगलबार मात्रै पनि मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो। हामीले भारतबाट आउनेहरूका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्रीसहितका विषयमा जाहेर गराएको थियौं। हामीले स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि यो कार्यमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भारतबाट आइसकेपछि ती नागरिकका लागि खान, बस्ने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नैपर्छ। मान्छे आइसकेपछि सुरक्षा दिने, भाग्न नदिने हाम्रो काम भयो। र, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्दै आएका छन्।
नगरपालिका, गाउँपालिका कसको क्षेत्रमा पर्‍यो हेर्ने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूको व्यवस्थापन गरिँदैछ। साथै प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। यही कुरा संघीय सरकारलाई पनि जाहेर गरेका छौँ। जाजरकोट, सुर्खेतसम्मका नागरिक आइराखेका छन्। दार्चुलामा पौडी खेलेरै प्रवेश गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकारसँगै प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।
प्रदेश नम्बर ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकको आवतजावत बढीजसो सुदूरपश्चिमकै जिल्लाहरूबाट हुन्छ। यो क्रममा कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ?
लकडाउन लागू गरिएको छ। नाकाहरू बन्द रहेका छन्। तर, आउने क्रम रोकिएको छैन। छैन। प्रहरीको आँखा छलेर र महाकाली नदीमा पौडिएर नेपाल प्रवेश गर्नेहरू पनि छन्। जताततै खुला सीमा छ। रोक्दा-रोक्दै पनि त्यसरी प्रवेश गर्नेहरू गाउँ जाने र संक्रमण भएमा गाउँमा फैलाउन सक्ने सम्भावना नै प्रमुख चुनौती हो। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग भारतसँग सीमा जोडिएको नाकाहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं।
यदि कोही व्यक्ति भारतबाट आएमा तत्कालै प्रहरीलाई सूचित गर्न वडा र टोलबासीलाई अनुरोध गरेका छौं। त्यस्ता व्यक्ति संक्रमित हुनसक्ने भएकाले लुकाइछिपाइ नराख्न हामीले अनुरोध गरेका छौं।
प्रहरीको अनुरोधलाई नागरिकस्तरबाट कस्तो सहयोग भइरहेको छ?
नागरिकस्तरबाट प्रहरीलाई सहयोग भइरहेको छ। नागरिकहरू आफ्नो स्वास्थ्यका लागि सचेत हुनुपर्ने बेला हो नि यो। भारतमा धेरै फैलिसक्यो। यहाँ चार जनालाई मात्रै संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यलाभ हुने क्रममा छ। सुरूमा ‘के होला र!’ भन्ने मानसिकता देखिएको थियो। तर, पछिल्लो समय भारतबाट फर्किएकाहरूको अभिलेख राखेर केही भएमा तुरून्तै क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी तयारी गरेका छौं। जिल्ला–जिल्लामा यही प्रक्रियामा काम भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा नागरिकपङ्क्तिबाट ज्यादै ठूलो समन्वय भइरहेको छ।
सिमापारि भारतीय क्वारेन्टाइनमा कति नेपालीलाई राखिएको छ? र, क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ?
नेपालमा कोरोना भाइरसको केस देखिएपछि भारतीय प्रशासनिक अधिकारीहरूमा पनि डर भयो। भारतबाट फर्किंदै गरेका नेपालीलाई त्यहाँकै सरकारले र नेपालमा रहेका भारतीयलाई यतैको सरकारले व्यवस्थापन गर्नेगरी समन्वय भयो। त्यसपछि वनबासा, टनकपुर लगायतका सिमावर्ती क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाल फर्किने क्रममा रहेका नेपालीहरूलाई विद्यालय तथा रङ्गशालाहरूमा राखिएको छ। यहाँ रहेका भारतीय नागरिकलाई हामीले आवश्यक व्यवस्थापन गरेका छौं।
प्रहरीले आफ्नो सुरक्षाका लागि ध्यान दिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सतर्कता कसरी अपनाइरहनु भएको छ?
प्रहरीहरू भित्र मात्रै बसेर हुँदैन। मिटिङ हुन्छ। फिल्डमा जानुपर्छ। विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। राहतका कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रहरी साथीहरूको मनोबल बढाउनका लागि म आफैं गएर आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिन र सतर्क रहन भनिएको छु। कोरोनाको जोखिम हुन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूलाई अपनाएका छौं। नागरिकको सुरक्षा गर्ने सवालमा हामी सधैँ कटिबद्ध रहँदै गर्दा यो महामारीका बेला आफ्नो सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि हामी उत्तिकै सतर्क रहेका छौं।